ဒီနှစ်သင်္ကြန် အနားမှာအတူမရှိနိုင်တော့တဲ့ ချစ်သူကို လွမ်းဆွတ် သတိရ တမ်းတကြေကွဲနေရှာတဲ့ နီလန်း . . . » MPA
ဒီနှစ်သင်္ကြန် အနားမှာအတူမရှိနိုင်တော့တဲ့ ချစ်သူကို လွမ်းဆွတ် သတိရ တမ်းတကြေကွဲနေရှာတဲ့ နီလန်း . . .
မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ Top 11 Finalist တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ ယခုအချိန်မှာလည်း ဂီတလောကမှာ နေရာတစ်နေရာရရှိဖို့အတွက် ကြိုးစားနေသူ နီလန်းဟာ ဘဝရဲ့ အချိုးအကွေ့တစ်ခုမှာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကံကြမ္မာတစ်ခုကို ရဲရဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာ သူမရဲ့ ချစ်ရသူချစ်သူက ဘဝတပါးသို့ကူးပြောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူနဲ့အတူ မနက်ဖြန်တိုင်းကို စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော် အတူရှိခွင့်ရချင်တာကတော့ ချစ်သူတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရှင်ကွဲကွဲသွားခဲ့ရသူတွေများစွာရှိကြပေမယ့် နီလန်းလိုအဖြစ်မျိုးကို ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ခံနိုင်ရည်အင်အားရှိနိုင်လောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
နီလန်းဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာ ထိုအဖြစ်ဆိုးကြီးကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ပရိသတ်ကြီးမြင်တွေ့ကြရမှာပါ။
ချစ်သူနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ရက်လေးတွေဟာ သူမအတွက်တော့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအတိဖြစ်ခဲ့မှာပါပဲ။ မနှစ်က သင်္ကြန်လေးမှာတော့ သူမတို့ ချစ်သူ ၂ ဦး ဘယ်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ သူမရဲ့ လွမ်းဆွတ်ဖွယ်စာသားအချို့က ဖော်ပြနေပါတယ်။
“April 14….. 2018 မနှစ်က ဒီချိန်ဆို သူနဲ့ပေါ့ အရမ်းပျော်ခဲ့တာ လမ်းလျှောက် သင်္ကြန်လေးသွားပြ်ီး ဆိုက်ကားလေးနဲ့အိမ်ပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးကို လွမ်းတယ်ဆိုတာထက်ပိုပါတယ် အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ”တဲ့။
ဒီနှစ်မှာ သူမအနားဘယ်တော့မှ မရှိနိုင်တော့တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတမှုတွေနဲ့ရေးသားထားတဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေဟာ ကြည့်မြင်ရသူတွေအဖို့လည်း ဝမ်းနည်းမှုကို ဖြစ်စေမှာပါနော်။
နီလန်းရေ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက် ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကို အောင်အောင်မြင်မြင်တည်ဆောက်သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။crd
မွနျမာအိုငျဒေါရဲ့ Top 11 Finalist တဈဦးအဖွဈ ပါဝငျနိုငျခဲ့ပွီးတော့ ယခုအခြိနျမှာလညျး ဂီတလောကမှာ နရောတဈနရောရရှိဖို့အတှကျ ကွိုးစားနသေူ နီလနျးဟာ ဘဝရဲ့ အခြိုးအကှတေ့ဈခုမှာ မြှျောလငျ့မထားတဲ့ ကံကွမ်မာတဈခုကို ရဲရဲရငျဆိုငျခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။
မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပှဲဝငျရောကျယှဉျပွိုငျနစေဉျကာလအတှငျးမှာ သူမရဲ့ ခဈြရသူခဈြသူက ဘဝတပါးသို့ကူးပွောငျးသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ခဈြသူနဲ့အတူ မနကျဖွနျတိုငျးကို စိတျကူးယဉျပုံဖျော အတူရှိခှငျ့ရခငျြတာကတော့ ခဈြသူတိုငျးရဲ့ ဆန်ဒဖွဈမယျလို့ ထငျပါတယျနျော။
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ရှငျကှဲကှဲသှားခဲ့ရသူတှမြေားစှာရှိကွပမေယျ့ နီလနျးလိုအဖွဈမြိုးကို ကွုံတှရေ့ငျဆိုငျရမယျဆိုရငျတော့ ခံနိုငျရညျအငျအားရှိနိုငျလောကျမှာမဟုတျပါဘူး။
နီလနျးဟာ ပွိုငျပှဲဝငျစဉျကာလအတှငျးမှာ ထိုအဖွဈဆိုးကွီးကို ရငျဆိုငျကွုံတှခေဲ့ပွီး ကွံ့ကွံ့ခံရငျဆိုငျခဲ့တာကိုလညျး ပရိသတျကွီးမွငျတှကွေ့ရမှာပါ။
ခဈြသူနဲ့အတူ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ သင်ျကွနျရကျလေးတှဟော သူမအတှကျတော့ ပြျောရှငျဖှယျရာအတိဖွဈခဲ့မှာပါပဲ။ မနှဈက သင်ျကွနျလေးမှာတော့ သူမတို့ ခဈြသူ ၂ ဦး ဘယျလိုပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ သူမရဲ့ လှမျးဆှတျဖှယျစာသားအခြို့က ဖျောပွနပေါတယျ။
“April 14….. 2018 မနှဈက ဒီခြိနျဆို သူနဲ့ပေါ့ အရမျးပြျောခဲ့တာ လမျးလြှောကျ သင်ျကွနျလေးသှာွးပျီး ဆိုကျကားလေးနဲ့အိမျပွနျခဲ့တဲ့အခြိနျလေးကို လှမျးတယျဆိုတာထကျပိုပါတယျ အားလုံးပဲ ပြျောရှငျကွပါစေ ”တဲ့။
ဒီနှဈမှာ သူမအနားဘယျတော့မှ မရှိနိုငျတော့တဲ့ လူတဈယောကျကို လှမျးဆှတျတမျးတမှုတှနေဲ့ရေးသားထားတဲ့ အမှတျတရပုံလေးတှဟော ကွညျ့မွငျရသူတှအေဖို့လညျး ဝမျးနညျးမှုကို ဖွဈစမှောပါနျော။
နီလနျးရေ ဘယျလိုအခွအေနပေဲရောကျရောကျ ကောငျးမှနျတဲ့ဘဝတဈခုကို အောငျအောငျမွငျမွငျတညျဆောကျသှားနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျနျော။crd